OGAWA ez-Tone Plus – High Performance Oscillator - BaganMart
Thada Glucose Meter Germany ( သွေးချိုတိုင်းစက် )
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 626 view counts
OGAWA ez-Tone Plus – High Performance Oscillator
Model : OE 0968
လုပျငနျးအမညျ : OGAWA MYANMAR CO.,LTD Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-538648,654701~5 Ext : 601, 09-431 68234, 095405629
Power Source : 220-240Vac
Alternating Current : 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 765mm x 418mm x 132mm
Weight : 18.1kg
OGAWA ezTone သည် High Performance Oscillator တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို Vibrate (တုန်ခါမှု) ဖြစ်စေတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့သော ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မချေဖျက်နိုင်သော အဆီပိုများကိုလည်း ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို တုန်ခါစေခြင်းဖြင့်
• သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေသည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်များကိုလည်းလျော့နည်းစေခြင်း
• စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုလျှော့ချပေးခြင်း
• ကိုယ်နေဟန်ထား ကျစ်လျစ်သွယ်လျစေခြင်း
• ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းပေးခြင်း
• ခန္ဓာကိုယ် ညောင်းညာနာကျင်မှုများကိုသက်သာစေခြင်း ...... စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်နှာပြင် (vaster workout area) နဲ့အတူ running, jogging, walking ဆိုပြီး area ၃ မျိုးပါတဲ့အတွက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Vibration intensity ကိုရွေးချယ်ပြီး အဆင်ပြေသလို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ezTone ကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အတူ တွဲဖက်ကစားနိုင်သလို လက်မောင်းသားတွေ ကျစ်လျစ်လှပအောင် ကစားနိုင်တဲ့ resistance cord system လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Wireless controller ပါတဲ့အတွက် လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အတူ စက်အောက်ခြေမှာ roller ပါဝင်တာကြောင့် အသုံးပြုသူတွေအတွက် သယ်ယူသိမ်းဆည်းရ လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
OGAWA Showroom မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သိလိုသည်များကိုOGAWA ၏ Facebook စာမျက်နှာ www.facebook.com/OGAWAMyanmar တွင် ၀င်ရောက်ရေးသား၍ဖြစ်စေ၊ (01) 654 701~5 Ext (601), 098615590 စတဲ့ဖုန်းများသို့ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိူင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ OGAWA ezTone ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ OGAWA Showroom တွေမှာ လာရောက်လေ့လာစမ်းသပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက် ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
OGAWA isaMalaysian health and wellness retail store established in 1996 by Mr. Wong Lee Keong& Ms. Lim Poh Kian. Since then, OGAWA has grown into the leading player in the design, development and marketing health and wellness equipment in Malaysia. Here in OGAWA, we are committed in encouragingahealthier lifestyle through creation of innovative products of the highest quality.OGAWA itself means “stream” in Japanese. It is the magic source of life and the desired merge of streams into the boundless mighty ocean. With the philosophy of “Spring of Wellness”, OGAWA is dedicated to share its wellness intelligence with everyone forabetter and healthier lifestyle.
OGAWA Smart Vogue Urban Matrix Massage Chair အနှိပ်ထိုင်ခုံ
Mobile Seat XE plus” (XD Tech Massage Cushion)
OGAWA Smart DeLight Plus တေးသီချင်းတွဲဖက်နားဆင်နိုင်သောအဆင့်မြင့်အနှိပ်ထိုင်ခုံ
Foottee Therapy – Foot Reflexology ခြေဖဝါးအညောင်းပြေအနှိပ်စက်
For OGAWA ez-Tone Plus – High Performance Oscillator
May I get the quotation for "OGAWA ez-Tone Plus – High Performance Oscillator" ?